China X6 grey Ukwenziwa kunye Factory | Itekhnoloji yoNyango esekwe kubungqina e-Hebei
Ithemometha ye-infrared ye-infrared iyaphatheka ngokuthembeka okuphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu, okunokulinganisa ngokukhawuleza ubushushu bomzimba womntu okanye ubushushu bezinto ngomboniso ocacileyo weLCD.
Ukubonelela ngokuthe ngqo ngokungalinganiyo kokunxibelelana ukukunika ukufundwa ngokuchanekileyo kwisithuba somzuzwana ukuze usebenzise ngokukuko nangokufanelekileyo
Khetha phakathi kokufunda amaqondo obushushu nge ° C okanye ° F
Umbala we-3Ukubonisa umkhuhlane xa ubushushu bomzimba buphezulu
Ithemometha iyakwazi ukugcina iidatha ezilinganisiweyo ezingama-32; Ungalubonisa ngokulula utshintsho lobushushu koogqirha bakho ngokwenza isifo.
Umboniso omkhulu weLCD kubandakanya utshintsho lombala njengoko amaqondo obushushu esiba phezulu. Umboniso okhanyayo ukuze ubone ubushushu bakho ngokuchanekileyo nasebumnyameni. Ngexesha elifanayo, nangona umntwana elele, ubushushu bunokulinganiswa ngokuzolileyo kwaye ngaphandle kokuphazamiseka
Ngokuzenzekelayo ucime amandla emva kwemizuzwana eli-10 ungasasebenzi ukuze ungabi naxhala lokulibala ukuvala ngokwakho
Isetyenziselwa ukulinganisa ubushushu bomzimba womntu nge-smart sensor, kwaye ubushushu begumbi abuyi kuchaphazela umlinganiso owunikiweyo.
I-infrared akukho buchwephesha boqhagamshelo bukhuseleke ngakumbi kwaye bungcono, obunokusetyenziselwa ukunciphisa umngcipheko wokungcoliseka komnqamlezo kunye nokunciphisa umngcipheko wokusasazeka kwezifo.
Ubushushu bunokufunyanwa ngaphakathi kwe-3cm (1.2 intshi) umgama wokulinganisa, usempilweni ngakumbi kwaye ulungele; ungaze ube nexhala lokuphazamisa umntwana oleleyo.
Uyilo lwe-Ergonomic ngesiphatho esingatyibilikiyo, esifaneleke ngakumbi kumlinganiso weqondo lobushushu kubantu abadala, abantwana kunye neentsana.
Egqithileyo X6 ngqo
Okulandelayo: X6 emfusa